Maitiro ekugadzirisa muchina unopindura pafoni yako? | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa muchina unopindura pafoni yako?
Jordi Gimenez | | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Mumwe wemibvunzo yatinogona kuzvibvunza ndeyedu yekumisikidza iyo yekupindura muchina we iPhone yedu uye mhinduro iri nyore kwazvo sezvo izvi kazhinji zvinoenderana nefoni yedu.
Hongu, zvinopfuura kungoita nharembozha pachayo, ibasa iro makambani anopa vatengi vavo uye mune izvi zvingave zvakakwana kufonera anoshanda uye kukumbira kuti ishandiswe. zvatinoziva se "voicemail" uye makagadzirira. Izvo zvakakosha kuti, zviripachena, isu tine runhare nemuchina wokupindura.
Asi nhasi isu tinoda kuenda nhanho imwe kumberi uye ngatione kuti tingaite sei otomatiki kupindura mafoni pane yedu iPhone kana shandisa sevhisi yekuona voicemail iyo iyo Cupertino firm inowedzera pane iyo iPhone.
Saka ngatiendei muzvikamu titange nesarudzo yekungopindura mafoni kubva ku iPhone, chinova chinhu chepedyo kuve nemuchina wokupindura asi pasina kudiwa kwekubatana neanoshanda chinja.
1 Maitiro ekuzvipindura otomatiki mafoni anouya
2 Gadzira voicemail yekuona
Maitiro ekuzvipindura otomatiki mafoni anouya
Mune ino kesi, iyi sarudzo iri yakavanzwa chaizvo uye inowanikwa mukati meChikamu Chekuwanika. Kune izvi, izvo zvatinofanirwa kuita zvinotevera:
Isu tinowana marongero e iPhone yedu
Isu tinopinda kuwanika uye tobva tabata
Dzvanya paAudio Kutaurirana uye sarudza kuti upindure otomatiki
Isu tinogadzira iyo nguva yatinoda kudzamara tada kuti kufona kuende-kure uye izvozvi
Nezvo izvi, zvatiri kuzobudirira ndezvekuti mafoni anouya anopindurwa zvizere otomatiki munguva yatakawedzera. Iyi ficha inogona kubatsira kune mamwe mamiriro ezvinhu apo kupindura foni kunogona kuva rakaoma basa.
Gadzira voicemail yekuona
Mune ino kesi, zvakafanira kuve nerutsigiro rweanoshanda uye munyika medu, mazhinji acho anotendera iri basa, saka musimboti iwe haufanire kunge uine matambudziko ekuimisa. Chero zvazvingava unogona bvunza pano chaipo kana wako opareta achibvumira iyi mhando ye visual voicemail pane yako iPhone.
Panguva iyo yatiinayo inoshanda neanoshanda Tinogona ikozvino kuenderera nekumisikidza kweizvi, izvo zviri nyore kwazvo:
Isu tinopinda maMagadzirirwo uye ipapo ini ndinopinda Runhare uye, ipapo, tinodzvanya paVoicemail tab.
Dhinda Gadzira Izvozvi
Isu tinogadzira password yevoicemail uye tinya pane OK
Isu tinosimbisa uye tinya OK zvakare
Isu tinosarudza Tsika kana Default. Ukasarudza Tsika, unogona kunyora kukwazisa kutsva
Uye wakagadzirira. Nezve izvi tinogona kutove nevoicemail inoshanda. Makore mashoma apfuura vashandisi vaishandisa ese marudzi ese meseji emazwi ezwi mabhokisi ema mail uye vamwe vakatowedzera nziyo kumatoni ekumirira vasati vatora foni. Kufanana nezvose zviri munyika ino, mafashoni anouya uye anoenda asi mune ino nyaya haisi yekudzokera kumashure munguva asi nezve kuziva izvozvo idzi mhando dzekugadzirisa dzinogoneka pane chero foni uye pane iPhone zvakare.
Vashandisi havawanzo kuve nematambudziko kana vachiita emabhokisi ezwi aya kana kufona zvinotsausa uye nhasi sarudzo dzatinadzo dzakawanda. Semuenzaniso, muazvino iPhones iwe unogona zvakare kugadzirisa kuti yako nhamba yefoni inoenda yakavanda yakananga kubva kune ayo marongero, hazvidiwe kuisa chero asterisk kana kurovera panguva yekufona. Zviri nyore kuwana izvo zveFoni marongero, sarudzo inonzi com "Ratidza ID yekufona" uye nayo ikadzimwa tinogona kudana chero nhamba muchivande, hazvidi kuti uwedzere chimwe chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maitiro ekugadzirisa muchina unopindura pafoni yako?
Carlos Ojeda akadaro
Munyika medu, maererano neApple peji, chete Movistar ndiye ane inoonekwa mailbox. Handifunge kuti ndivo vazhinji vevashandisi.
Pindura Carlos Ojeda
Apple inoenderera ichitungamira kutengesa kwema smartwatches mukota yechitatu yegore rino
UAG Monarch naLucent, maviri masitaira ekuchengeta yako iPhone